Kufuneka ubenele kwigumbi lababhinqileyo
I-Shapewear namhlanje kukude kude neengubo zethu zoomama bethu ababesanxiba. Kule mihla banxibile kwaye babhiyozelwa ziinkwenkwezi ezininzi kunye neelenbhile kwaye ziyinyani ngokuqinisekileyo kwigumbi ngalinye.kodwa kutheni? Kutheni sinxiba impahla emilo?
Nokuba yinto yephathi, eqhelekileyo okanye enxibe ngokudibanisa, ukutshintsha imbonakalo kungayiguqula imbonakalo iyonke kwaye iphakamise ukuzithemba kwakho. Zininzi izibonelelo zokunxiba iimpahla zokwakheka njengoko zinceda umzimba u-contour, ngakumbi xa uzama ukufezekisa imbonakalo efanelekileyo ngaphambi kokuya kwimicimbi ethile ebalulekileyo. Ngapha koko, ukujonga okuhle kuhlala kubalulekile ukwenza umbono eluntwini. Luhlobo lweembumbulu zomzimba eziguqula amathanga, esinqeni, esinqeni, nasentanjeni. Izibonelelo zethu ezona ziphambili zokunxiba imilo yokufezekisa ukufezekisa isilwanyana esibhinqileyo. Nge-shaper elungileyo, unokufezekisa umzobo ochanekileyo we-hourglass kunye nokuncoma isinxibo.
Isibonelelo sokugqibela sezinto zokumila kunye nesona sizathu sithandwayo sokunxiba iimpahla zokuma imbonakalo ebonakalayo. Kukho izambatho zeemilo ezenzelwe onke amalungu omzimba ukubanceda babonakale bengqindilili.
Ukuqina komzimba weTummy eQinisekileyo:
Uyilo lweglue lokuthambeka esinqeni.Akuqengqeleki, lide ngokwaneleyo ukuba ligubungele isisu sakho esisezantsi kwaye lingabonakali lula phantsi kwengubo yakho.eNkxaso ye-Extra kwindawo yakho yesisu .Ingubo ephezulu yomzimba yengubo ebukhali yenziwa kwilaphu eliphakamileyo elongayo isinqe sakho, ukulawula isisu sakho kunye nokuthoba isinqe sakho, ukuqaqamba okuthe tye kunye nokuthambile, akukho mvakalelo yokuzibamba.Lonto libukhali lomzimba liya kuyilajika ijikajike lomzimba ukuze libonakalise ukuzithemba kwakho.
Umphakamisi we-Slimming Butt unokwakheka okubonakalayo, okushiya igumbi le-butt yakho kunye ne-hip etyibilikileyo, ayicinezeli i-hip kwaye iya kunika isigqubuthelo esigcweleyo kwi-butt.Lonto i-butt lifter icwangcisa amafutshane, kunye noyilo lwe-3D-hips Imeko ye-droop flat, ikuncede wakhe ii-peach hips, ukunceda i-butt yakho ikhangeleke intle kwaye iyimpump.
Nikezela ngeempahla ezimile zembobo enezikhuselo.Ingafakwanga i-butt lifter padt butt panties ezi-4 ezikhutshiweyo zemipu siye saziphucula ngokukhethekileyo iipads kunye nemiphetho ukunqanda ukubhenca imigca phantsi kwamatayi, i-jean, i-leggings okanye i-dress.Enzelela okhalweni lwakho kwaye ujike iijika zakho zendalo. Ukwenza indawo yakho ye-bum kunye ne-buttox ibonakale inkulu kwaye ijikelezwe ngokwenene.
Ukuphuma kunye nezibonelelo zobudala
Njengoko sikhula, imizimba yethu iyaguga. Oku kuyindalo. Ihembe labasetyhini liyanceda ukuba umzimba uxhaswe kwaye kuthintele i-humpback, i-chest chest, prolapse esifubeni, isinqe se-pail, i-flat hip, ukuthanda ukutya okuvelele, umlenze we-turnip, umlenze o-bulky, kunye nokuninzi. Ngapha koko, abasetyhini abanengxaki yokulimala kwe-bladder banokufumana kwakhona izibonelelo zemilo njengoko inikezela ngokunyusa okuncinci ngenkxaso efanelekileyo. Elona candelo lililo, kusetyenziswa iilaphu zokuyila, ikwanceda kakhulu kwintshukumo yokulahleka kwesisindo.
Ukuphuculwa kokuma kunye nezihlunu zesisu
Iingubo zangaphantsi zabasetyhini zinobungqingqwa obuqhelekileyo, kwaye ke, kunika uxinzelelo kwaye luxhasa umva wakho. Oku kwenza umzimba wakho uthi tye kwaye uqinile. Ikwanceda nasekupheliseni iintlungu kwindawo engemva yomva kunye ne-lumbar. Oku kuphucula kakhulu ukuhamba kwakho nokuhlala. Ngoku, abantu abaninzi banokucinga ukuba iimpahla zokumila zinokunxitywa kuphela ukuba umzimba ugqunywe ziingubo ezinde. Ewe, akukho mgaqo uloluhlobo, kwaye ngenxa yoko, unokunxitywa phantsi kweempahla. Iimpawu zilungile kubafazi abafuna ukubonakala kwizinxibo zabo zangaphambi kokukhulelwa.
Ixesha lokuposa: Aprili-02-2020